Akhriso: Dowladda Britain oo ka digtay in AMISOM ay Soomaaliya ka baxaan. Sawirro – XOGMAAL.COM
Dhinaca kale Warsaxaafadeed ayaa laga soo saaray Booqashadii Wasiirka UK ee Arrimaha Afrika Harriet Baldwin ay ku timid Soomaaliya
Dowladda Ingiriiska ayaa ku celisay sida ay uga go’an tahay kaalmeynta ciidanka AMISOM inta ay ku jiraan xilliga kala guurka.
Harriett Baldwin Wasiirka Ingiriiska ee arrimaha Afrika oo booqasho ku timid Soomaaliya ayaa kulan ay Muqdisho kula yeelatay Amb. Francisco Madeira wakiilka Midowga Afrika ee Soomaliya waxa ay sheegtay ka bixitaan waqti hore ee ciidanka AMISOM Soomaaliya inay halis gelineyso ammaanka guud ee Soomaaliya.
Mss Harriett Wasiirka Ingiriiska ee arrimaha Afrika ayaa midaasi bedelkeeda waxa ay ku baaqday bixitaan taxadar leh oo ku saleysan awooda ciidanka ammaanka Soomaaliya.
Waa safarkii ugu horeeyay ku timid daba-yaaqadii todobaadkan Soomaaliya,iyadoona booqatay magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa.
Mss Baldwin ayaa safarkeedi imaanaya,xilli dhowaan safar ay ku timid Afrika Ra”iisal Wasaaraha UK, Theresa May, iyadoo shaacisay taageero cusub ay u balan qaaday Soomaaliya, sidii looga xal gaari lahaa arrimaha ammaanka iyo xasiloonida.UK ayaa kamid ah sadeexda wadan ee ugu horeeya, deeq bixinta Soomaaliya.
Wasiirka UK ee Arrimaha Africa, Harriet Baldwin MP,waxay Muqdisho kulan kula qaadatay Ra’isul Wasare Hassan Ali Kheyre, iyadoo ku boogadisay arrimaha hormarineed ay hirgelisay dowladda,waxayna balan qaaday inay Dowladda Ingiirska xoojineyso taageerada Dowladda Federaalka ee Soomaaliya kuna cel celisay mashaariicdii horumarineyd ee muhiimka ahaa oo ay hirgalisay Dowladda UK.
Intii ay Muqdisho joogtay waxay booqatay xarunta Boooliska lagu tababaro taaso oo ay maalgaliso UK iyo xarumaha AMISOM, iyadoo ka codsatay wadamada aduunka in ay deeq bixintooda lacageed ku aadan AMISOM ay sii kordhiyaan.
Harriet Baldwin waxey sii adkeysay balanqaadkii $60million ay ubalanqaaday Soomaaliya Raisul Wasaarajha UK Theresa May sidii lagu horumarin lahaa mashaariic farabadan oo arrimaha bini’adminimada qeyb ka tahay.
Daawo:- Darawal ganaax adag ku muteystay Daanyeer uu Bas rakaab ku aaminay